Mursal iyo Muudey oo kulan la leh Xasan iyo Shariif - Caasimada Online
Home Warar Mursal iyo Muudey oo kulan la leh Xasan iyo Shariif
Mursal iyo Muudey oo kulan la leh Xasan iyo Shariif
Muqdisho (Caasimada Online) – Xarunta Madasha Xisbiyadda Qaran ee Muqdisho waxaa ka socda kulan ay albaabadu u xiranyihiin oo u dhaxeeya madaxweynayaashii hore ee dalka, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed iyo guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal iyo ku xigeenkiisa koowaad Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh ugu tegay xaruntooda Madasha, waxaana halkaas weli ka socda kulan u dhaxeeya labada dhinac.
Faahfaahin rasmi ah laga hayo waxyaabaha looga hadlayo kulankaas, balse xildhibaano ka tirsan Madasha ayaa Caasimada Online u xaqiijiyey in dalabka kulankaas uu ka yimid guddoonka golaha shacabka, sidaasna ay ku gaareen xarunta Madasha.
Sidoo kale wararka illaa hadda aan ka helnay kulankaas weli socda waxay sheegayaan in guddoomiyeyaashu ay Madaxweyne Farmaajo fariin uga sidaan hoggaanka Madasha oo ah madaxweynayaashii isaga ka horeeyey ee dalka.
Caasimada Online kala soco wixii ka soo baxa kulankaas.